Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Xuquuqul Insaaka Itoobiya, oo Taliska Wayaanaha Dhaleeceeyay.
Ururka Xuquuqul Insaaka Itoobiya, oo Taliska Wayaanaha Dhaleeceeyay.
War qoraal ah oo kasoo baxay ururka xuquuqda aadamaha ee Itoobiya ayaa lagu dhaleeceeyay dhaqanka xun ee xukuumada wayaanaha iyo tacadiyada uu ciidan keedu kagaysato wadanka lagumaysto ee Ogadenia.
Ururka xuquuqul insaanka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada wayaanaha oo haysta amarka taliska sare ee wayaanaha ay gaysteen tacadiyo aad ubadan oo isugu jira dil, jidh-dil xidhay, kufsi iyo dhac baahsan, kuwaas oo loogaystay guud ahaan shacabka lagumaysto ee taliska wayaanaha kuhoos nool gaar ahaan kuwa Ogadenia kudhaqan.
Ururka xuquuqda aadamaha ee Itoobiya ayaa sheegay in 65 qof oo shacab ah dhawaan lagu dilay Gobolka Shabeelle, halka 125 kalana lagu dhaawacay, kuwaas oo dhamaantood ahaa dad shacab ah oo biri magaydo ah.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in dhamaan Gobolada wadanka Ogadenia laga gaystay xasuuq aad ubaahsan, kuwaas oo tiro koobkoodii ay kujiraan, sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay in ay Ogadenia ku xidh xidhan yihiin dad kumanyaal ah oo shacab ah.
Dhinaca kale xubin kasocda Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka ayaa booqasho ku imanaya wadanka Gumaysiga Itoobiya, isagoo sida lasheegay mari doona dhowr wadan oo bariga Africa ah.
Ambasader Yamamoto ayaa lagu wadaa in xukuumada wayaanaha uu kala hadli doono arimo dhowr ah oo xuquuqul insaanku ay koow katahay. Waxayna dowlada Maraykanku diiwaan galisay kiisas badan oo dhinaca aadamaha ah oo kadhacay Itoobiya.